Soo dejisan Mindomo 3.0.15 – Android – Vessoft
AndroidXafiiska,Kuwa kaleQoraalada iyo Jadwalka,Software kaleMindomo
Mindomo – software ah in ay arki fikradaha iyo qorshayaasha qaab nidaamyada kala duwan. software The awood si ay u abuuraan fikradda wayn iyo horumarinta qorshaha dheeraad ah talaabo ay ku daray diiwaanka cusub. Mindomo waa ay awoodaan in ay soo rogaan hyperlinks ku saabsan diiwaanka, dhigay amarka of muhiimadda ay leedahay in diiwaanka, ku dar sanamyadii ilo kala duwan, astaysto font iyo qoraalka size. Mindomo kuu ogolaanayaa inaad bedesho daahfurnaanta nidaamada, loogu yeero boqolkiiba dhammaystirka hawsha loo xilsaaray oo dhigay taariikh ku bilaabatay, duration iyo dhamaystirka qorshaha ah. Sidoo kale Mindomo u saamaxaaya in ay isticmaalaan habyaalada diyaar nidaamada iyo mawduucyada midab for asalka.
tafatirka Common dhex internetka
Jiritaanka habyaalada diyaar